लिपजिग को लडाई (1813)
लिपजिग को लडाई - Napoleonic वार्स बेला प्रमुख लडाई को एक। युद्धमा मा 1813 दावेदार नेपोलियन सेना को सेना र छैटौं विरोधी फ्रान्सेली गठबन्धनको थिए अक्टोबर7- यो सक्सोनी4मा स्थान लियो।
1812 मा नेपोलियन को रूसी अभियान, पूर्ण असफलता मा समाप्त भयो। यो सम्राट छैटौं विरोधी फ्रान्सेली गठबन्धनको को विरोधीहरूले सिर्जना गर्न पुगे। यो रूस, इङ्गल्याण्ड, Prussia, स्पेन, पोर्चुगल, स्वीडेन बनेको छ।
पहिलो प्रमुख युद्धमा विजेता जो को फ्रान्सेली सेना आए Bautzen, मा प्रतिद्वन्द्वी बीच स्थान लियो। सेना छैटौं विरोधी फ्रान्सेली गठबन्धनको Grosberenom, Katzbach र Dennewitz Kulm मा नेपोलियन पराजित भयो। 1813 मा, मित्र ड्रेस्डेन र सक्सोनी मा एक आपत्तिजनक शुरू र चाँडै लिपजिग को प्रसिद्ध युद्ध गरे।
युद्धको पूर्वसन्ध्या मा स्थिति
नेपोलियन गरेको घट्दैछ को कारण बुझ्न र आफ्नो सेना पराजित गर्न, स्थिति लिपजिग को जो युद्धमा विचार गर्नुपर्छ। 1813 सक्सोनी पर्याप्त भारी भयो। उत्तर, बोहेमिया (अष्ट्रीया क्षेत्र मार्शल K. Shvartserber) G र सिलेसियन (Prussian सामान्य जी Blucher) (स्वीडिश क्राउन प्रिन्स जीन Bernadotte को आदेश अन्तर्गत): कि इलाका3अग्रिम कुनै कारणको लागि एकजुट भएको समुह सेनाहरूका शरद ऋतु मा। पनि युद्धमा आए: र पोलिश सेना (उत्पत्ति एल Benningsen) अस्थायी रूपमा आरक्षित मा आयोजित गरिएको छ।
नेपोलियन मूल सेना विच्छेद प्रहार आशा, तर तीव्र गतिमा परिवर्तन वातावरण, समय र प्रयास को कमी उहाँलाई आफ्नो मनसाय त्याग्न बाध्य भएको थियो। फ्रान्सेली सेना को सम्राट लिपजिग को जिल्ला मा राखिएको थियो।
यो संरचना र प्रतिद्वन्द्वी को बल
यो युद्धको इतिहास संग अपरिचित एक व्यक्ति, प्रश्न उठ्न सक्छ: "किन गरे लिपजिग को युद्धमा राष्ट्रका युद्धमा भनिन्छ?"। यस द्वन्द्वमा नेपोलियन गरेको पक्ष फ्रान्सेली, डंडे, डच, इटालियनहरू, को Belgians र Saxons संलग्न भन्ने तथ्यलाई। को संबद्ध सेना को भाग रूपमा एकै समयमा Austrians, Swedes, रूसी साम्राज्यको मानिसहरू को Prussians, Bavarians थिए।
फ्रान्सेली सेना 2,00,000 मानिसहरू शामिल र 700 बन्दुक नजिकै। को Bohemian 578 बारूद थियो जो बारे 133 हजार सैनिक, लडे। Silezkaya सेना 60,000 मानिसहरू शामिल, र उत्तर - 58 000, क्रमशः 315 बन्दुक र 256, स्थित छ जो। पोलिश सेना 54 हजार सैनिक र 186 बारूद थिए।
घटनाहरू अक्टोबर 4
1813 मा राष्ट्र को युद्धमा लिपजिग नजिकै जहाँ सेना तैनात थियो बोहेमिया साइट मा थाले। पनि युद्धमा अघि तीन समूह विभाजन भएको थियो। फ्रान्सेली मा मुख्य आक्रमण एम बी Barklaya डे Tolly को आदेश अन्तर्गत पहिलो भाग धारण थियो। आक्रामक समयमा, अक्टोबर4को बिहान, यो समूह सहर एक नम्बर जफत। तर Austrians एमबी अस्वीकार समर्थन र तिनीहरूले हटाउनुहोस् बाध्य भए गर्न Barclay डे Tolly।
MURAT छ को आदेश अन्तर्गत नेपोलियन गरेको cavalry कोर संग क्षेत्र मा एक सफलता थाले। Wachau। Cossack रेजिमेन्ट संग अर्थात् लाग्यौं एप्रैम, को सेना को भाग थियो अलेक्जेन्डर म, फ्रान्सेली सेना सुरु स्थिति फिर्ता राख्नु भएको छ।
अन्य नेपोलियन क्षेत्र र Viderits Möckern मा शत्रुहरूको आक्रमण repulsed। nightfall मा, लड सबै दिशामा रोकियो। युद्धमा को अन्त द्वारा शत्रु स्थितिहरू वास्तवमा परिवर्तन गर्दैन। लडाई समयमा प्रतिद्वन्द्वी लगभग 30 हजार हराएको छ। सबैजना।
पहिलो दिन को परिणाम
लिपजिग को युद्धमा को पहिलो दिनमा एक तान्ने मा समाप्त भएको थियो। दुवै पक्ष आंशिक विजय प्राप्त (Lidenau र Wachau, मित्र मा नेपोलियन सेना - Mekerne अन्तर्गत), समग्र अवस्था छैन असर गरे जो। तर विरोधी फ्रान्सेली गठबन्धनको को स्थिति तिनीहरूले Bennigsen र Bernadotte को सहायता गर्न आए भन्ने तथ्यलाई राम्रो कारण थियो। नेपोलियन मात्र राइन को सानो बाडे मा गणना गर्न सक्छ।
घटनाहरू अक्टोबर 5
यो दिन मा सैन्य कार्य कायम गरिएको थियो। मात्र Blucher सेना को उत्तर मा गाउँमा र Oytritssh Golis कब्जा र लिपजिग नजिक आए। रात नेपोलियन शहर यसलाई ल्याउन क्रममा सेना regrouped। फलस्वरूप, फ्रान्सेली सेना लिपजिग नजिकै रक्षात्मक चाप राखिएको। बारी मा, नेपोलियन सेना मित्र सिलेसियन एक अर्धवृत घेरिएको - उत्तरी मा, उत्तर र पोलिस - पूर्व बोहेमिया - दक्षिण।
घटनाहरू अक्टोबर 6
लिपजिग को युद्धमा6अक्टोबर मा बिहान जारी गरिएको थियो। यो दिन मा, फ्रान्सेली सेना एक रक्षात्मक स्थिति लिए, र एक सफल काउन्टर-आक्रमण को बुँदा को हानि संग। नेपोलियन गरेको सेना को मनोवैज्ञानिक अवस्था मित्र छेउमा Saxon घोडचढी प्रभाग र व्युर्टेंबर्ग को अचानक पारी उडायो। आफ्नो विश्वासघात केन्द्रीय स्थिति को depopulation गर्न नेतृत्व, तर सम्राट चाँडै आरक्षित गर्न अवस्था फेंक र स्थिर गर्न सक्षम थियो। सेना आक्रमण विरोधी फ्रान्सेली गठबन्धनको, पनि, छैन धेरै सफल छ। यो आरक्षित एकाइहरु को निष्क्रियता मा विभिन्न समय र असंगत आपत्तिजनक कारण थियो।
Probstgeyde, Tsukelgauzenom, Goltsgauzenom, Dozenom, Paunsdorf र Losnigom अन्तर्गत आयोजित यस दिन मा मुख्य लडाई। दिन को अन्त गरेर फ्रान्सेली केन्द्र बाहेक लगभग सबै Flanks मा स्थिति पकड व्यवस्थित। तर तिनीहरूले आफ्नो लडाई किरा को लगभग सबै गुमाएका र नेपोलियन यो अवस्था सेना को पूर्ण विनाश निम्त्याउन भनेर थाह थियो।
घटनाहरू अक्टोबर 7
अक्टोबर7को बिहान, नेपोलियन सेना हटाउनुहोस् गर्न थाले। को मित्र को Elster गर्न नजिकिंदै मा फ्रान्सेली सेना तोड्न गर्ने लक्ष्य थिएन, तिनीहरूले लिपजिग आँधी आफ्नो सेना पठाए। यो गर्न, तीन स्तम्भहरू चाँडै शहर सारियो जो, सिर्जना भएको छ। स्थानीय युद्धमा सुरु गर्न अनुरोध गरिएको थियो, तर विरोधी फ्रान्सेली गठबन्धनको नेपोलियन को कुल आत्मसमर्पण माग। खाजा मा मित्र शहर पर्खाल stormed।
फ्रान्सेली आदेश जानाजानी माथि पुल को Elster भन्दा, को मित्र द्वारा यसको सेना कटौती र यसलाई भाग्न अनुमति झटका थियो। तर यो समय को हावा अगाडि मा लगाए थियो र केही भागहरु शहरमा बाँकी थियो। तिनीहरूले पौडी द्वारा उम्कन थियो। धेरै सैनिकहरू सही पानी मा मारिए। तिनीहरूमध्ये मार्शल जे Poniatowski थियो। पछि दिउँसो सेना विरोधी फ्रान्सेली गठबन्धनको लिपजिग गर्न व्यवस्थित।
युद्धमा को नतिजा
सामान्य नेपोलियन गरेको घाटा 60 हजार राशि। सैनिक, सैनिक को नै नम्बर विरोधी फ्रान्सेली गठबन्धनको हराएको बारे। शाही सेना को मित्र को कार्यहरू राम्रो समन्वित थिए छैन र युरोपेली शासकहरूले अक्सर सहमति पुग्न सकेन भन्ने तथ्यलाई गर्न धेरै हदसम्म कारण कुल हार बच्न व्यवस्थित।
लिपजिग को युद्धमा नेतृत्व भनेर आवश्यक राजनीतिक परिणाम हो। वर्ष 1813 नेपोलियन लागि एकदम गाह्रो हुन बाहिर गरियो। लिपजिग युद्ध मा हार पछि पतन पछि थियो को राइन को कन्फडरेशन। जर्मन सैन्य कार्य मुक्ति पछि फ्रान्स इलाका फैलियो। मार्च मा, मित्र पेरिस लिएका थिए र देश मा राजतन्त्र को एक बहाली भयो।
लिपजिग युद्ध को स्मृति
लिपजिग को लडाई (राष्ट्रका युद्धमा), सबै भन्दा को Napoleonic युद्ध को इतिहास मा महत्वपूर्ण को एक। यो पनि "तीन सम्राटहरूको युद्ध" को रूपमा उल्लेख गरिएको छ
1814 मा जर्मनी मा यो युद्धको स्मृति मा एक भव्य विजय गरियो।
1913 मा, एक महान् स्मारक "राष्ट्रका युद्ध गर्न स्मारक" लिपजिग खोलिएको थियो।
छैन टाढा यो पनि आज गाडे Fallen सैनिकहरू जहाँ सेन्ट Aleksievsky मन्दिर, निर्माण गरिएको छ देखि। यो GDR उहाँले जर्मन राष्ट्रवाद एक महिमामय छलफल भएको थियो रूपमा, स्मारक नष्ट गर्न योजना बनाएका थिए कि उल्लेख गर्नुपर्छ। तथापि, समय यो रूपमा देख्न थाले मित्रताको प्रतीक रूस संग र अधिकारीहरूले स्मारक बचत गर्न निर्णय गरेका छौं।
साथै, 100 वार्षिकोत्सव युद्धमा Commemorative सिक्का (3 अंक) जारी गरिएको छ।
आज, लिपजिग ठूलो युद्धको इतिहास समर्पित केही संग्रहालयहरु स्थित छ।
को वर्दी के हो? रूसी सैन्य वर्दी
समारोह गूढ रहस्य: कस्तो GPU (GPU) छ। को Cheka GPU को फरक छ
Rosetta स्टोन - मिश्र को रहस्यहरुलाई गर्न प्रमुख
प्राचीन ग्रीस मा Areopagus के हो र किन यो भ्रमण गर्न आवश्यक?
रंगीन कपाल स्प्रे: बाल irresistible बनाउन सबै भन्दा राम्रो तरिका
कसरी खाली पेट मा तेल पिउन? समीक्षा र सिफारिसहरू
ओठ वृद्धि लागि पम्प: समीक्षा
टमाटर अबेर Blight उपचार र रोकथाम
कालो कपाल को गाढा किसिमहरु। कालो कपाल को किसिमहरु: फोटो
"सैन्य अस्पताल प्यतिगोर्स्क": फोटो र समीक्षा
आफ्नो हातमा कागज लालटेन। क्रिसमस लालटेन: योजना